Nadiifiyaha Roogga (4) Warshad - Nadiifiyaha Roogga Shiinaha (4) Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Nadiifiye rooga seddex-mid-ah - DTJ3A / DTJ4A (Biyaha qabow iyo kuwa kulul)
Mashiinka nadiifinta rooga ee saddexda-mid ah wuxuu ku buufiyaa nadiifiyaha rooga-hooseeya iyo biyo ku yaal roogga iyada oo loo marayo mashiinka lagu buufiyo biyaha iyo qiiqa hawo-mareenka. Isla mar ahaantaana, mashiinka burushka rullaluistemadka ayaa burushka rullaluistemadka ku riixaya xawaare sare, isagoo maraya wasakhda salka rooga iyadoo loo marayo Sifeeyaha saabuunta, nadiifi, ku xoq rooga burushka burushka, ugu dambeynna nuug bulaacada iyada oo loo marayo matoor nuugid awood sare leh.
20L / 30L / 40L Nadiifiyaha Roogga LC-20SC, LC-30SC, LC-40SC
LC taxane Nadiifiyaha rooga oo ah mashiin loo isticmaali karo iskuday iyo qoyan nadiif, waxaana loo isticmaali karaa nadiifinta rooga. Markaad samaynaysid nadiifinta roogga, buufinta, maydhashada, iyo qalajinta 3 geeddi-socod haddii la dhammaystiro isla markaa taas oo ka dhigaysa in roogga la wada nadiifiyo. Naqshadaynta jidhku waa mid ugub ah oo casri ah, oo leh adeegsi dabacsan & ku habboon, gaar ahaan ku habboon marinka, hoolka shirarka, makhaayadaha iwm meelaha lagu nadiifiyo rooga.
Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa qalab buuxa oo faakiyuum ah, kaas oo noqon kara faakuumayn qoyan oo qalalan adoo isku xiraya qaybaha siyaada ah ee kala duwan.
Mashiinka Ka saarida Roogga –DTJ1A / DTJ1AR (Biyaha qabow iyo kuwa kulul)
Noocyada soo dejinta, dammaanad tayo leh. Gudaha taangiga biyaha, ku kordhi shaashadda shaandhada aan xirmin. Tuubbo nuugid ah 7.5m oo dibedda ah iyo nuugista biyaha, waxay awood u siineysaa in lagu nadiifiyo 7.5 mitir gudahood. Daawada nuuga (ikhtiyaari ah) oo ku shaqeynaya hal mashiin, aad ugu habboon, looma baahna in daaha laga rogo daahyada ama daboolka fadhiga ee lagu dhaqo, ku maydh ceeryaamo biyo ah iyo 80% qalalan muddo gaaban. DTJ1AR waa nooc biyo qabow iyo kulul. Shayga Xogta Farsamada DTJ1A Voltage / Frequency 220V-240V / 50Hz Power 3230W Current ...
Sariirtu waa nooca ugu badan ee qalabka guryaha, waana sidoo kale tan ugu badan ee la isticmaalo. Tani waxay keenaysaa in si fudud loo wasakheeyo oo u baahan nadiifin joogto ah oo aan jeexjeexin fadhiga salootada.